Iibso Xakamaynta Jilicsan ee SMOOTH Q3 3-Axis Smartphone Gimbal Stabilizer oo Fill Light - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Gacan-qaboojiyaha Gacanta Fudud SMOOTH Q3 3-Axis Smartphone Gimbal Stabilizer With Fill Light
$ 130.99 qiimaha joogtada ah $ 218.99
maraakiibta From United States SPAIN Shiinaha Australia Russian Federation
Color DHAGAX Q3 YAR Q3 Isku-darka
Mareykanka / DHAGAX Q3 SPAIN / DHAQAN Q3 Combo Shiinaha / DHAQAN Q3 Isku-darka Ustaraaliya / DHAQAN Q3 Combo Mareykanka / DHAQAN Q3 Isku-darka Xiriirka Ruushka / SMOOTH Q3 Combo Xiriirka Ruushka / SMOOTH Q3 SPAIN / DHAQAN Q3 Australia / DHAQAN Q3 Shiinaha / DHAQAN Q3
Jaangooyo gacanta ku haysa SMOOTH Q3 3-dhidibka Aaladda casriga ah ee xasiliyaha xasilloonida leh Buuxi Iftiin - Shiinaha / SMOOTH Q3 Combo gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Xaglaha cinwaanka: -260 °
Xagal xagal: -170 ° -170 °
Xagasha Mashiinka: -150 ° -150 °
Lambarka Moodalka: SMOOTH Q3
Muuqaal: Kadib qaabka toogashada
Qalabka Moobilka Lagu Taageeray Xajmiga Ugu Weyn: Wareeg 55mm-90mm
Miisaan (g): 750g
Cabir: 45 * 154 * 180mm (cabir isku laaban) 90 * 127 * 279mm (cabbir balaaran)
Toogasho toos ah: Haa
Bixinta Lacagta ee Shaqeysa: 150g-280g
U Iftiim Jid Kasta: Isku-darka nalka isku-beddelka isku-dhafan oo leh badhanka taabashada si uu kaaga iftiimiyo dhammaan xaglaha oo leh saddex heer dhalaal oo laysku halayn karo. Dammaanad kaa siinaysa inaad ka iftiimiso xagga hore, xagga dambe, ama 180 ° hareerahaaga oo dhan.
Nidaamka Xasilinta Saddex-dhidibka: Qaab-dhismeedka saddex-dhudhun oo muuqaal la yaab leh oo deggan oo siman leh.
Dolly Zoom Instant: Hel isla markiiba Dolly Zoom oo samee filimo gaagaaban oo shineemo ah oo leh dhawr talaabo oo fudud oo ku saabsan barnaamijka.
Tiro badan "Adiga", Baashaal badan: Kalinimo naftaada isla shaashadda ah oo leh 'MagicClone Pano' si ay u muujiso dhinacyo kala duwan
Ka dib Sameynta Caqli & Fudud: Markasta ku eka nalka. Ku hawl geli SmartFollow 3.0 hal tuubbo oo keliya adoo adeegsanaya App-ka.
* Muuqaalkan wuxuu u baahan yahay in lagu isticmaalo ZY Cami App.
ZY Cami App: Fur madadaalo badan adoo adeegsanaya Smooth Q3 oo leh ZY Cami, oo ku habboon labada taleefan ee iOS iyo Android.
Xubinnimada Ra'iisul: Waxyaalo aad u horumarsan oo loogu talagalay xubnaha Ra'iisul Wasaaraha: Shaandheeyeyaal horumarsan, Muusig gaar ah, Tafatirka Cloud, iyo 4K Video Upload.
Haa Dheh Si aad u Tilmaamto Tilmaam: Miyaa aad u badan tahay in gacmahaaga la qabto? Isticmaal hal tilmaam si aad u xakameyso toogashada intaad adigu noqon karto naftaada meel kasta oo aad rabto. Waxaa lagu heli karaa qaabab badan oo panorama ah.
Fadlan soo dejiso APP "ZY Cami" kadib markaad hesho Smooth Q3.
Akoon ka diiwaangeli ZY Cami.
Ku rakib taleefanka dushiisa ka dhig dheelitirka, shido taleefanka Bluetooth iyo Smooth Q3, ku xir telefoonka ZY Cami.
Ku billow isticmaalka Smooth Q3-gaaga.
My iPhone XR maya ayaa ku xidhi kara. .. Gaarsiin dhakhso badan Cusub sanduuqa. Ku qanacsanahay dukaanka.
Shayga waa fiican yahay oo sida ku cad waxa lagu sifeeyey. Ubo dib udhac kudhowaad 5 maalmood oo rarka ah keyd la'aan awgeed, waxaan hada tixgaliyaa Q3 iibsi kafiican Dji OM4. Batariga yar laakiin qaababka jimicsiga ka beddel, ka fudud kana raqiisan. Waxaan uga tagayaa xiise aad ii farxad gelisay, milkiilayaasha Huawei P40 Zy Cami App wuxuu u oggol yahay inuu wax ku duubo 24fps.
Comme la sharax, tres ku qanacsan
Qiimaha lacagta, mahadsanid